Nirefodrefotra ny basy, niampatrampatra ny faty: mpangalatra taribin-jiron’ny Jirama telo lahy maty voatifitry ny zandary | NewsMada
Nirefodrefotra ny basy, niampatrampatra ny faty: mpangalatra taribin-jiron’ny Jirama telo lahy maty voatifitry ny zandary
Par Taratra sur 20/12/2019
Efatra izy ireo, saingy tafaporitsaka ny iray. Tavela ny telo lahy, lavon’ny zandary, taorian’ny fifamaliana tifitra nandritra ny ora vitsivitsy, omaly tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Teo am-panapahana ny taribin-jiron’ny Jirama, tao Antanandava indrindra ireto jiolahy ireto no izao nifanehitra tamin’ny zandary izao.
Jiolahy miisa efatra teo am-panapahana taribin-jiro mitondra herinaratra an’ny orinasa Jirama avy any Ivolobe mankany Toamasina ireto nifamaly tifitra tamin’ny zandary ireto. Naharitra ora vitsivitsy ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Vokany, lavon’ny balan’ny zandary ny telo tamin’ireo jiolahy dia ry Sabotsy Remy, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Dakoto, i Jean Nonoh ary Randrianantenaina Jeannot na i Jakoba. Tafaporitsaka kosa ny iray antsoina hoe i Piso ary efa fantatra ny mombamomba azy ka heverina fa tsy ho ela dia ho tratra ity jiolahy ity, araka ny fanazavan’ny zandary. Mangataka ny fiaraha-miasa amin’ireo olon-tsotra manam-baovao mikasika ireny jiolahy miriaria any anaty fiarahamonina ireny ny zandary mba hametrahana fandriampahalemana maharitra, hoy ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandary Atsinanana, ny Kly Ranaivoarison Théodule.
Efa nahatratra 25 km ireo taribin-jiro lasan’ny jiolahy…
Raha hiverenana, anisan’ny mampitaraina ny mponina ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana ity resaka fahatapahan-jiro matetika ity vokatry ny halatra tariby mitondra herinaratra ataon’ny jiolahy. Nahitam-bokany anefa ny ezaka nataon’ny zandary hamongorana ireo fanetribem-pirenena ka izao rotidrotiky ny bala izao ry zalahy. Nandritra ny firesahana tamin’ny tonian’ny fampanoavana Fitsarana ambaratonga voalohany, i Laurent Rajaonah Thierry, omaly maraina tao amin’ny birao fiasany no nahalalana fa raha ny tatitry ny Jirama tonga tao aminy dia efa nahatratra hatrany amin’ny 25 km ny halavan’ny taribin’ny Jirama very, ny taona 2018 raha 12 km tamin’ity taona 2019 ity izay nanamafisany fa tsy maintsy fongorina ireo mpividy halatra sy miray tendro amin’ireo jiolahy.